Xus kooban oo Muqdisho loogu sameeyey maalinta ciidamada cirka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Munaasabadaan kooban loogu dabaaldegayay sanadguuradii 54aad ee kasoo wareeggtay markii la aas aasay ciidanka cirka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay Xerada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho.
Munaasabadda ayaa waxaa ka qeybgalay Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, Taliyaha Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed S/guuto Daahir Aaden Cilmi, Abaanduulaha ciidanka S/guuto C/risaaq khaliif Cilmi, Agaasimaha hay’adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka S/gaas Bashiir Maxamed Jaamac, Taliyaha ciidanka badda Admiral Madeey Nuur, Taliyaha ciidanka cirka S/guuto Maxamuud Sheekh Cali “Dable Baylood” iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka.
Wasiirka Gaashaandhigga iyo Saraakiisha Ciidamada Qalabka sida ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo aan badneyn oo la sheegay iney ka tirsan yihiin ciidanka Cirka Soomaaliya.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo khudbadiii ugu dambeysay ka jeediyay munaasabadda ayaa tilmaamay in Wasaaraddu ka go’antahay dib u dhiska ciidamada qalabka sida, isagoo xusay in ciidamada cirka lagu soo kordhin doono dhallinyaro loo tababari doono duulimaadyada iyo farsamada diyaaradaha ay ku howlgalayaan ciidamada cirka.
Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa rajo ka muujiyey in sanad xiga munaasabadda nucaan ah la qaban doono iaydoo ciidamada cirka Soomaaliya heystaan diyaarado sida uu yiri.
Taliyaha ciidanka cirka S/guuto Maxamuud Sheekh Cali “Dable Baylood” oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada badda Soomaaliya ka hooseeyaan heerkii ay joogeen markii la aasasayayey.
Taliyaha ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya looga fadhiyo sidii loo xoojin lahaa ciidamada cirka Soomaaliya oo hadda lagu tiolmaami karo kuwo aan jirin.
Ciidanka Cirka Soomaaliya ayaa la aas aasay 15-kii Feberaayo sanadkii 1960-kii, iyagoo door firfircoon kasoo qaatay difaacidda hawada dalka mudadii burburka ka hor, waxaana haatan muuqata dedaallo dib loogu dhisayo ciidamadaas.
Muqdisho: Askari bas lagu dhex dilay oo qorigii laga qaatay